Tag: dhaqanka macmiilka | Martech Zone
Tag: dhaqanka macmiilka
Shirkadaha B2C waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu horreeya ee dadaallada falanqaynta macaamiisha. Jaangooyooyin kala duwan sida ganacsiga elektaroonigga ah, warbaahinta bulshada, iyo ganacsiga moobiilku waxay u saamaxeen ganacsiyada noocan oo kale ah inay xagal-daaciyaan suuq-geynta oo ay bixiyaan adeegyo macaamiil oo aad u wanaagsan. Gaar ahaan, xog ballaaran iyo falanqeyn heer sare ah oo loo maro habraaca barashada mashiinka ayaa u suuragelisay istiraatiijiyadda B2C inay si wanaagsan u aqoonsadaan dhaqanka macaamiisha iyo howlahooda iyagoo adeegsanaya nidaamyada khadka tooska ah. Barashada mashiinka ayaa sidoo kale bixisa karti soo kordheysa si loo helo aragti ku saabsan macaamiisha ganacsiga. Si kastaba ha noqotee, korsashada shirkadaha B2B